बैतडीमा जन्मियो टाउको नै नभएको बच्चा ! - E Net Nepal
Home Amazing World बैतडीमा जन्मियो टाउको नै नभएको बच्चा !
E NET NEPAL 9:08 PM Amazing World,
असार ११ - बुढापाकाले भने झैं बाँच्नु चाहिं पर्छ संसारमा अनेक देख्न र अनेक किसीमको घटना घटेको सुन्न पाईन्छ । प्रकृतिले मानिसलाई कहिलेकहीं यस्तरी धोका दिन्छ कि कहिले जन्मँदै आखाँ नभएको बच्चाको जन्म हुन्छ त कहिले जिब्रो नै नभएको बच्चा जन्मिन्छ । यस्तै अचम्मको घटना घटेको छ बैतडी जिल्ला अस्पतालमा ।
जिल्ला अस्पताल बैतडीमा टाउको नै नभएको वच्चा जन्मीएको छ । दार्चुला जिल्लाको तपोवन गाविस वडा नं.१ मार्माकी २० वर्षीय सुत्केरी महिला गीता विष्टले टाउको नै नभएको बच्चा जन्माएकी हुन् । टाउको नै नभएको बच्चा जन्मनुको कारणबारे बुझ्न खोज्दा जन्मजात विकृतिका कारण टाउको नभएको वच्चा जन्मिएको जिल्ला अस्पतालमा कार्यरत अनमी सकुन्तोला लुहारले वताउनुभयो ।
दस गते विहान जिल्ला अस्पतालमा पुगेकी विष्टले राति सवा ९ वजे मात्रै वच्चा पाएकी थिइन् । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बैतडीका प्रमुख डा. गुणराज अवस्थीका अनुसार १ केजी तौल भएको वच्चा जन्मने वित्तिकै मरिसकेको छ भने आमाको अवस्था अहिले सामान्य रहेको छ ।
गर्भ रहनु भन्दा ३ महिना अगाडी फोलिक एसिड सेवन गरे यस्तो समस्या नआउने उहाँको भनाइ छ । गर्भवतीले रक्तअल्पता कम गर्न खाने आइरन चक्कीमै मिश्रण भएको अर्को तत्व फोलिक एसिड हो । फोलिक एसिडले गर्भमा रहेको शिशुको मानसिक विकासमा ठूलो भूमिका निर्वाह गर्ने चिकित्सकले जनानाएका छन् ।
गर्भावस्थामा फोलिक एसिडको अभावमा बच्चामा तीन वर्षको उमेर पुग्दा पनि बोली नफुट्ने, महिना नपुगी जन्मन सक्ने, कम तौलको हुने, संक्रमणको खतरा बढ्ने, बच्चा जन्माउँदा अलिकति आमाले थाम्न नसक्ने र ज्यादै जटिल अवस्थामा आमाको पेटभित्रै बच्चा खेर जान पनि सक्ने सम्भावना रहने गरेको चिकित्सकहरु बताउंछन् । गर्भावस्थाको सुरुका दिनमा फोलिक एसिड कमी भए स्नायु तन्त्रको समुचित विकासमा असर परेर बच्चाको बोली फुट्न ढिलो हुने स्त्री तथा बालरोग विषेशज्ञहरु बताउंछन् ।
नेपालका पाहाडी विकट क्षेत्रमा स्वास्थ्य केन्द्र र स्वास्थ्यकर्मीको कमी र सुरक्षित मातृत्व सम्बन्धी जनचेतानाको अभाबले गर्दा विकट ग्रामीण क्षेत्रमा यस्ता घटनाहरु बढ्दै गएका छन् । सरकारको ध्यान कहिले जाला यता ?
By E NET NEPAL at 9:08 PM
dat condition is called anencephly